Jobho anoenderera mberi achipindura (1-25)
‘Nei Mwari asingatari nguva?’ (1)
Anotaura kuti Mwari anobvumira zvakaipa (12)
Vatadzi vanofarira rima (13-17)
24 “Neiko Wemasimbaose asina kutara nguva yekutonga?+ Nei vaya vanomuziva vasingaoni zuva rake?* 2 Vanhu vanochinja zviratidzo zvemiganhu;+Vanoba makwai voenda nawo kumafuro avo. 3 Vanotinha dhongi renherera voenda naroUye pavanokweretesa chirikadzi, vanoibatira mombe yayo.+ 4 Vanoita kuti varombo vabude mumugwagwa;Vasina mubatsiri panyika vanofanira kuvahwanda.+ 5 Varombo vanotsvaga zvekudya murenje semadhongi emusango;+Vanotsvagira vana vavo zvekudya mugwenga. 6 Vanotofanira kukohwa muminda yevamwe*Uye vanonhonga zvinenge zvasara muminda yemizambiringa yevakaipa. 7 Vanorara usiku hwese vakashama, vasina chekupfeka;+Havana chekufuka muchando. 8 Vanotota nemvura yemumakomo;Vanoti kwati kwati nematombo vachishaya pekuhwanda. 9 Nherera inobvutwa pazamu raamai vayo;+Uye zvipfeko zvevarombo zvinotorwa kuti zvifanobatwa vachipiwa chikwereti,+ 10 Zvoita kuti vafambe vakashama, vasina kupfeka,Uye vaine nzara, vachitakura zvisote zvezviyo. 11 Vanofondoka kuchipisa muminda ine zvidziro iri mumateru emakomo;*Vanotsika-tsika mazambiringa muchisviniro chewaini, asi vanofa nenyota.+ 12 Vaya vari kufa vari kungogomera muguta;Vaya vakuvadzwa zvekufa vari* kuchema vachida kubatsirwa,+Asi Mwari haaoni sepane chakaipa.* 13 Pane vaya vanopandukira chiedza;+Havana basa nenzira dzacho,Uye havateveri nzira dzacho. 14 Mhondi inomuka kwaedza;Inouraya asina mubatsiri nemurombo,+Kana hwava usiku inotanga kuba. 15 Ziso remhombwe rinomirira kuti zuva rivire,+Ichiti, ‘Hapana anenge achindiona!’+ Uye inozvifukidza kumeso. 16 Murima, vanopaza vachipinda* mudzimba;Kana ari masikati vanozvipfigira mukati. Chiedza havatombochizivi.+ 17 Nekuti kwavari mangwanani akafanana nerima gobvu;Chavanoziva kutyisa kwerima gobvu. 18 Asi vanokukurwa nemvura nekukurumidza.* Munda wavo uchatukwa.+ Havazodzoki kuminda yavo yemizambiringa. 19 Kupedzwa kunoitwa chando chinenge chanyunguduka kana kusinganayi uye kuchipisa,Ndiko kupedzwa kunoitwa neGuva* vaya vanenge vaita chivi!+ 20 Amai vake vachamukanganwa;* honye dzichaita mabiko paari. Haazoyeukwizve.+ Uye kusarurama kuchatyorwa semuti. 21 Anoitira zvakaipa mukadzi asingabereki,Uye anobata zvakaipa chirikadzi. 22 Mwari achashandisa simba rake kubvisa vane simba;Kunyange vangakwirira, havana chokwadi neupenyu hwavo. 23 Mwari* anovarega vachiva nechivimbo vakachengeteka,+Asi maziso ake ari pazvese zvavanoita.*+ 24 Vanokudzwa kwekanguva, vobva vaparara.+ Vanodzikiswa+ uye vanounganidzwa sezvinongoitwa munhu wese;Vanochekwa sehura* dzezviyo. 25 Saka ndiani achati ndiri kunyepaKana kuti angaramba mashoko angu?”
^ Kureva, zuva rake rekutonga.
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kukohwa uswa mumunda.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Vanosvina mafuta pakati pezvidziro zviri mumateru.”
^ Kana kuti “Mweya yevakuvadzwa iri.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Mwari haapi mumwe munhu mhosva.”
^ ChiHeb., “vanochera vachipinda.”
^ ChiHeb., “Anokurumidza kana ari pamusoro pemvura.”
^ ChiHeb., “Chibereko chichamukanganwa.”
^ ChiHeb., “Iye.”
^ ChiHeb., “panzira dzavo.”